KUN HABEEN IYO HABEEN QEYBTII 15-aad: Caawo iyo Sheekada oo meel xun gaartay – Filimside.net
December 6, 2017 Cabdiraxmaan Anteeno
Sheekada waxay noo mareysay qeybtii hore markey Gabdhihii xanaaqeen oo sadax mar lugaha dhulka ku garaaceen ayaa waxaa kala furmay albaab dhulka hoostiisa ku yaalaya waxaana kasoo baxay todobo adoon oo aad uxoog badan sidoo kalana ku hubeysan seefo. markaas ayay gabdhihii ku amreen adoomadii in nimankaan xiraan kadibna kurka ka gooyaan.
Markaas ayay gabdhihii dhaheen ukaadiya oo siiya mudo hal saac midkastana sababta halkaan keentay iyo qisadiisa hala weyddiyo kadibna kurka halaga gooyo.
Markaas ayuu wiilkii xamaaliga ahaa yiri “waan idin baryaa aniga hala iga cafiyo dilkaan wlhi nolol macaan oon dhib laheen ayaan kujirnay kahor inteysan fuqaradaan iyo tujaartaan baas noo imaan oo aduunkii daba gadin balaayo haku dhacdee ee iska key cafiya aniga wuxuuna tiriyay tix gabay oo micnaheedu yahay, maxaa ka fiican in qaadirka ku cafiyo, gaar ahaan markaadan wax gargaare heysan, ee ha xarimina kalgaceylkii dhexdeena yaalay, hana udilana kan hore dhibkey keeneen kuwa dambe.
markaas ayay gabdhihii ku qosleen maadaama uu si qosol badan hadalka isugu duway iskuna difaacay, kadib waxay dhaheen midkasta qisadiisa hanoo sheego kadibna irida haka baxo halkaan dambana yuusan kusoo laaban.
Waxaa istaagay xamaaligii wuxuuna yiri aniga qisadeyda waa lawada yaqaanaa waxaana iska ahay xamaali basiid ah, ilaa aad idinka iiga imaadeen waxkake oo aan wariyana ma jiraan.
Markaas bay ku dhaheen waad fasaxantahay ee halkaan isaga tag markalana yaanan lagu arkin. markaas ayuu yiri maya wllhi baanan baxeynin anoon maqlin sheekada nimankaan kale halkii ayuuna fariistay.
Markaas ayaa waxaa lasoo qabtay faqiiriintii midkii koowaad waxaana la weydiiyay maxay tahay sheekadaaada ishaada saan ahna maku dhalatay maxaana sabab u ah in madaxaaga xiirnaado iyo faqrigaan aad ku jirtid??
Markaas ayuu yiri aniga ilbuun kuma dhalan sidaana ma aheyn waxaana iqabsatay sheeko qariib ah oo hadaan ku qoro xitaa irbad ay cibro unoqoneyso qofkastoo cibro qaato
SHEEKADII FAQIIRKII KOOWAAD.
wuxuu hadalkiisii ku bilaabay:
Aniga waxaan ahaan jiray wiil uu boqor dhalay waxaana jiray nin adeerkey ahaa oo isna boqor kale ka ahaa magaalo kale,
aniga adeerkey inaan utago oon soo booqdo wiilkiisana oo ahaa ina adeerkeey lasoo ciyaaro aad ayaan ujeclaa,
inta badana waan booqan jiray waana utagi jiray.
Maalintii dambe ayaan adeerkey booqday wuuna isoo dhaweeyay asigoona isharfay kadibna waxaa dhacday waxaa ii yimid ina adeerkeey wuxuuna igu dhahay ina adeerow hal arin ayaan kaa codsanayaa ee ma iisameyneysaa markaas ayaan dhahay haa waana ka ballan qaaday inaan usameeyo wixii aan awoodo, markaas ayuu iwaday wuxuuna igeeyay meel qubuuro ah agteeda wuxuuna idhahay halkaan igu sii sug waan soo noqone, markuu in cabaar maqnaa ayuu soo noqday asigoo ay la socoto gabar xijaaban oo aanan la arkeynin kadibna god meesha ku yaalay ayuu qoday cabaar markuu qodayay ayaa waxaa so baxay albaab wuxuuna galiyay gabadhii kadibna wuxuu igu dhahay ” walalow hadii an ina adeerkaa ahay waxaan kaa codsanayaa inaad godkaan markii aan albaabka xirto igu daboosho oo kor ka duugto qofna usheegin waa codsi”
markaas ayaan ka ogolaaday oo sidii usameeyay, kadibna waxaan kusoo laabtay qasrigii, subaxii markuu waagii baryay ayaan soo kacay anigoo naxsan waana ka murugooday inaan ina adeerkii godkii ku xiray kadibna waxaa dhacday waan soo baxay waxaana imid goobtii lkn meeshii waan garan waayay saan uraadinayay ayuu gabalkii iigu dhacay kadibna waxaan ulaabtay qasrigii anigoon adeerkey waxba usheegin ayaan subaxii dambe ku noqday boqortooyadii aabaheyga anoo shalaay daran dareemayo maxayse shalaay ii tari.
Kadib waxaa dhacday markii aan kusoo laabtay magaaladii uu aabaheyga ka talinaanayay ayaan waxaan magaalada ugu imid jawi kale iyo iyadoo wax walba isku qasan yihiin kadib ayaan dadkii wareystay waxaana la iisheegay in aabaheyga la dilay boqortooyadiina uu la wareegay waziirkii iyadoo hadalkii la ii wado anigana naxsanahay kana xumahay dilkii aabaheyga loo geystay ayaa waxaa meesha yimid ciidankii waziirka wayna iwadeen iyadoo la iigeeyay waziirkii oo ay xurguf hore noo dhaxaysay.
Waxayna aheyd anoo yar ayaa maalin qasriga waxaa kusoo dagatay shimbir anigana waxaa gacanta iigu jiray fargan markaas ayaa shimbirtii dhagax ku tuuray anigoo fargankii adeegsanayo nasiib xumo waziirkii oo meesha marayay ayuu isha uga dhacay dhagixii halkaas ayuuna ishiisa ku waayay.
Ciilkaas hore ayuu ii qabay sidaas darteed maadaama aan markaas ahaa wiil boqor igama uusan aarsan karin lkn hada gacantiisa ayaana kujiraa, markii la iigeeyay ayuu wuxuu amar kusiiyay askartiisii horta in isha la iga rido sidaas ayaa ishii la iiga riday.
Kadibna mid kamid ahaa askartiisii ayuu ii gacan galiyay wuxuuna dhahay ninkaan wad oo meel hebla geey kadib in ta disho meydkiisa bada ku tuur.
Sidii ayuuna iisoo waday askarigii oo aan aqoon ulahaa markaas ayuu markuu meeshii ikeenay ayaan waxaan ka tuugay inuusan idilin anigoo soo xusuusinaay.
Markaas ayaan waxaan kudhahay aniga gabadhaada waxba kama ogi lkn wiilkaada waxaa dhacday sidaas iyo sidaas waana uwaramay sidey wax udhaceen, markaas ayuu farxay igana codsaday inaan geeyo goobtii, kadibna markaan geeyayoo aan god god ufaagnay meeshii ilaa aan markii dambe albaabkii ka aragnay kadibna gudaha ayaan horay ugu galnay axaana godkii ku aragnay raashiin cuno iyo cabitaan badan ilaa markii dambe aan utagnay wiilkii iyo gabadhii oo sariir isla saaran lkn isku badaleen dhuxul .
Markaas ayuu odaygii adeerkey ahaa dhahay naclad haku dhacdee imisaan uga digayay walaashiisa wuxuuna iisheegay in wiilkiisa uu ku fidnoobay walaashiisa isla markaasna laga kari waayay lkn markii dambe waan kala qariyay ayuu dhahay balse si ay isku helaan ayay waxaan usameeyeen cadaabkii alle ayaana sidaas ugu yimid.
markaas ayuu igu dhahay waan duugeynaa wixii dhacayna qofna ma ogaaneyso waayahay ayaana dhahay si ceebta banaanka aysan u imaanin.
kadibna markaan magaaladii kusoo laabanay ayaan waxaan ka warhelnay in waziirkii magaaladii adeerkeyna uu kusoo duulay xoogna kula wareegay markuu ka itaal roonaaday ciidankii ilaalalda ahaa sidaas darteeda aniga si aan dhibaato ugu soo jiidin miskiinkii ibadbaadiyay ayaan timihii isaga xiiray magaaladiina kasoo safray
Markii aan ogaaday in waziirkii uu la wareegay magaladii adeerkey ayaan si aan la ii aqoonsan timihii isaga soo xiiray dharkiina isaga badalay kadibna waxaan imid magaalada baqdaad si aan amiiral mu,minii haaruun al-rashiid ugu waramo anigoo jidka socda ayaan waxaan la kulmay ninkaan kale ee faqiirka ah markaan is wareysanay kadibna waxaan naga horyimid faqiirkaan kale sidii ayaana isku soo weheshanay sadaxdeenii aqiir ilaa aan halkaan ka imaanay.
aniga waa taasaa sheekeydii waxaana halkaan u imaaday inuu wax ii qabto khaliifka.
markuu amiirkii mu,miniinta hadalkaas maqlay ayuu aad ula yaabay aadna uga murugooday.
markaas ayay gabdhihii ku dhaheen faqiirkii koowaad waad fasaxantahay waadna bixi kartaa.
markaas ayuu dhahay maya wlhi baanan baxeynin ilaa aan ka maqlo sheekada nimankaan kale, halkii ayuuna fariistay.
waxaa soo kacay faqiirkii labaad
SHEEKADII FAQIIRKII LABAAD.
Waxaa Aqrisay 4,093
asc xaga isku xidhka sxb wasiirka askarigiisa ayuu ugashekaynayaa miyaa walahah isku finoobey mise adeerkii ayuu uwaramaayaa ninkan boqorku dhaley
halkaas ma fahmine